Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo kulan mahadcelin ah la qaatay Wafdigii ka socday Djabuuti+(Sawiro) | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo kulan mahadcelin ah la qaatay Wafdigii...
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo kulan mahadcelin ah la qaatay Wafdigii ka socday Djabuuti+(Sawiro)
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka MahdiMaxamed Guuleed Khadar ayaa Maanta kulan mahadcelin ah la qaatay wafdigii ka socday Djabuuti, kuwaasi oo u yimid in ay ka qeyb qataan gurmadka Musiibdda 14-kii bishan ka dhacday Muqdisho.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenku waxa uu ka mahadceliyey sida Dowladda iyo shacabka Jabuuti had iyo goor u garab taagan yihiin Walaalahood Soomaaliyeed.
Dowladda Jabuuti ayaa maalmo ka hor magaalada Muqdisho u soo dirtay diyaarad siday gargaar caafimaad iyo dhaqaatiir oo lagu caawinayo dadkii ku dhaawacmay Qaraxii sabtidii la soo dhaafay ay Argagixisada ka fuliyeen Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
Waxaana dhaqaatiirta hogaaminayay Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti oo Muqdisho ka sheegay in mar waliba Dowladda Jabuuti ka garab taagan tahay Shacabka iyo Dowladda Soomaaliya.
Tageerada Jabuuti ay siiso Soomaaliya oo dhinacyo badan leh ayaa hadana waxaa Soomaaliya ka jooga Ciidamo qeyb ka ah howlgalka AMISOM kuwaasoo loogu magacdaray Hiil Walaal oo dagaal adag kula jira Al-Shabaab.
Previous articleSaxaafadda Soomaaliyeed oo isku raacay in dhex dhexaad aysan ka noqon doonin Baahinta Xasuuqa Argagixisada Alshabaab ay geeysanayaan “Sawirro”
Next articleWaddada Isgoyska Zoobe oo howl dib u dayactir ka bilaabatay “Sawirro”